रिजल्ट निकालेपछि बबण्डर, इज्जत जोगाउन लखनऊ – NepalayaNews.com
“अन्त्यहीन इच्छा ” प्रबासी का लागी शिक्षा
टिपिकल नेवारी खाना अब काठमाडौँ फ्युजन किचनमा
दुई केन्द्रीय सदस्यको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस बैठकमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्टको प्रस्ताव
एनजीओको खेलौना बन्दै नेपालको ओली सरकार
राजदूत शेर्पाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
जापानमा अमेरिकी सेनाको दुईवटा लडाकु विमान ठोक्किए, ६ जना बेपत्ता
मृर्गौला रोगबाट पिडित गुरूङलाई शितल ज्योति क्लबको सहयोग
अबदेखि चर्को स्वरमा लाउडस्पिकर बजाउन प्रतिबन्ध
इरानद्वारा अमेरिकालाई समुद्री मार्ग बन्द गर्ने चेतावनी
अन्तरप्रदेश परिषद बैठकको तयारी पूरा
रिजल्ट निकालेपछि बबण्डर, इज्जत जोगाउन लखनऊ
२६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:४७
निजामती सेवामा रहँदाका अनुभव र अनुभूति पाठकको जानकारीमा पनि रहोस् भन्ने चाहना राखी हाम्रासामु बाँड्न खेमराज रेग्मीलाई आग्रह गर्‍यौं । रेग्मीले निजामती सेवाका विभिन्न ओहदामा रही गृहसचिवका रुपमा समेत काम गर्नुभएको अनुभव सँगाल्नु भएको छ । हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरी पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले ठमनाथ घिमिरेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
शिक्षा अधिकारीका रुपमा पहिलो पोस्टिङ कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भयो । यो २०३८ सालको कुरा हो । त्यसबेला जिल्लामा एउटा शिक्षक छनौट समिति भन्ने हुन्थ्यो । तीन सदस्यीय त्यो समितिमा संयोजकका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदस्य सचिवमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षकहरुमध्येबाट एक जना रहने व्यवस्था थियो । मैले त्यहाँ जिशिअका रुपमा काम गर्नथालेपछि शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि हामीले विज्ञापन निकाल्यौं । अब परीक्षा लिनुपर्ने भयो । त्यहाँ त जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरुलाई कोटा बितरण गर्ने चलन रहेछ । त्यतिमात्र होइन, सोही कोटालाई आधार मानी परीक्षा लिएजस्तो गरेर तिनका मानिसहरुलाई पास गर्नुपर्ने थिति बाँधिएको रहेछ । योग्य भन्दा पनि कोटाका मानिसहरु पार्ने गरिएको रहेछ ।
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी
कपिलवस्तुमा त्यसबेला तीनवटा समूह रहेछन् । एउटा समूह भगवान् गुप्ताको थियो । उनका छोरा अहिले पनि माननीय छन् । गुप्ताजी २/३ पटक माननीय भए । दोस्रो समूह मधेसी समुदायका साहहरुको थियो । त्यो समूहका कोही मानिस २०१५ सालमा सहायक मन्त्रीसम्म भएका थिए । पशुपतिप्रताप साहहरुको सन्तान हुन्– यिनीहरु । तेस्रो समूह पहाडी मूलका रजौरियाहरुको । यी तिनै समूहलाई कोटा छुट्याउनुपर्ने रहेछ । सत्तामा भएको समूहलाई अलिक धेरै, प्रतिष्पर्धीलाई त्यसभन्दा कम र अर्को समूहलाई अझ कम कोटा दिएर मुखबुझो लाउने गरिएको रहेछ । यो सबै राजनीति र शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न स्वरुप गरिएको हुनुपर्छ । त्यसबेलासम्म परीक्षा चाहिँ देखावटी मात्र हुँदो रहेछ ।
हामी केही मानिस राजनीतिक रुपले चिनिएका थियौं । त्यसबेला पाल्पामा हरि नेपाल, चन्द्र केसी, चन्द्र भण्डारी, नारायण कोइराला, म र अरु थुप्रै थियौं । हामीहरु ०३६ सालमा त राजनीतिको अग्रपङ्तिमै देखिएका थियौं । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय निरीक्षकका रुपमा कार्यरत रहेको भए पनि राजनीतिक रुपमा हामी अगाडि देखिएका थियौं ।
म लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर गएको थिएँ । लोकसेवा आयोग नहुँदोहो त हामीजस्तो केही मानि सरकारी सेवामा हुने थिएनौं । मैले लोकसेवा आयोगको परीक्षाप्रणाली र निष्पक्षतालाई नजिकबाट नियालेको हुँदा प्रभावत थिएँ । मैले लोकसेवा आयोगको ढाँचामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने मनसुवा राखेर त्यो छनौट समितिबाट पास गराएँ । अब प्रश्न बनाउन कसलाई लगाउने भन्ने भयो । त्यसमा पनि तिनै राजनीतिक समूहका शिक्षकहरुमात्र छन् ! मैले प्रजातन्त्रप्रति समर्पित शिक्षकहरुलाई पनि सामेल गराउने सोच बनाएँ । यिनीहरु अनुशासनमा बस्छन् र मलाई पनि सहयोग लिन सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाई मेरो थियो । यसै अनुसार शिक्षक छनौट गरेर प्रश्नपत्र बनाउन लगाएँ । यहाँ पनि लोकसेवा आयोगकै ढाँचा पछ्याएँ । प्रश्नपत्र २/३ प्रति बनाउन लगाएँ । त्यसमध्येबाट छानेर दिने ध्येयले त्यसो गरिएको थियो । प्रश्नपत्र बनाउन लगाउने, तिनलाई त्यही कार्यालयभित्रै खाना खुवाएर राख्ने, बाहिर निस्कनै नदिने परिस्थिति सिर्जना गरेँ । १२ बजेदेखि परीक्षा हुँदैछ भनेपछि लिथोबाट प्रश्नपत्र तयार गरेर तिनीहरुलाई सँगै परीक्षाहलमा जाने प्रबन्ध मिलाएँ । यसो गर्दा कसैले लिक गर्नसक्ने सम्भावना भएन ।
अब परीक्षा भयो । परीक्षार्थीबाट कपि लिँदा सम्पूर्ण कपि उठाउनू र मिसमास हुन दिनू भनेँ । क्रम मिलाउने काम नगर्नू भनेँ । यसो गर्दा कसैले रोलनम्बर याद गरेको रहेछ भने पनि छलछाम गर्न नपाउने भयो । सबै कपी ल्याइसकेपछि तिनै शिक्षक, कर्मचारीलाई कोडिङ गर्न लगाएँ ।
त्यसपछि कपी जाँच्नुपर्ने भयो । ती मानिसलाई बिहान ८ बजेदेखि कपि जाँच गर्न आउनू भनेँ । उनीहरुलाई पहिलेकै फर्मूला अन्तर्गत विहान ८ बजे आउने, कार्यालयमै खाना खाने र बेलुका ५ बजे घर जानू भनेँ । यिनीहरु कसैले परीक्षार्थीको हस्ताक्षर देखेर थाहा पाए भने हो नभए कसको कपी कुन हो भन्ने थाहा हुने भएन । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रिजल्ट निकालेँ । रिजल्ट निकालेपछि बबण्डर मच्चियो । इन्टरभ्यूमा कसैलाई नम्बर थपेर पास फेल गराउन सक्ने अवस्था भएन । किनभने लोकसेवा आयोगकै जस्तो २० प्रतिशत थप संख्यामा मात्र रिजल्ट निकालिएको थियो । मलाई ज्यान जोगाउनसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था आयो किनभने ती समूहका धेरै मानिस फेल भए । त्यसबेला लमजुङतिरका घिमिरे प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, मलाई तिनले राम्रै सहयोग गरे ।
त्यसबेला सत्तामा साह र गुप्ता थिए । धेरै मानिस रजौरिया र प्रतिबन्धित कांग्रेस समूहका पास भएका रहेछन् । पढ्ने जति पास भए नपढ्ने फेल भए । साह र गुप्ता समूहका मानिसले रिजल्ट लागू हुन नदिन ठूलो प्रयत्न गरे । म टसमस भइनँ, केही गर्दा पनि मान्दै मानिनँ । त्यसबेला पनि भारत गएर प्रमाणपत्र किनेर ल्याउने चलन थियो । त्यस्तै प्रमाणपत्रका आधारमा हरुवाचरुवा राखिएका मानिसहरुलाई कोटामा पास गराउने चलन तोडिएको थियो । कोटामार्फत पास भएका मानिसमध्ये कति त स्कूलै जाँदारहेनछन्, तर तलब चाहिँ खाने । कोही हेडमास्टरले सहायक मास्टर राखेको छ, कोहीले के गरेको छ– यस्तै हुँदो रहेछ । त्यसबेला त्रैमासिक रुपमा निकासा हुने गर्दथ्यो ।
गुप्ता र साह पक्षका मानिस मलाई सरुवा गर्न दौडधूप गर्न थाले । यति गरेभन्ने ठेगान नै भएन । उनीहरुले केन्द्रमा धेरै ठूलो प्रेसर सिर्जना गरिसकेका रहेछन् । वास्तवमा मलाई नारायणदत्त जोशीले कपिलवस्तु लगेका रहेछन् । जोशी डोटीका हुन् । त्यसबेला उनी शिक्षा मन्त्री थिए । त्यसबेलाको पञ्चायती राजनीतिमा उनको राम्रै पकड थियो । त्यही ताका पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा क्षेत्रीय सम्मेलन हुने भयो । त्यहाँ मन्त्री पनि गए । तत्कालीन शिक्षा (अतिरिक्त/सहसचिव ?) सचिव नारायण श्रेष्ठ हुन् क्यार ! उनी पनि गए ।
उनी चित्तरञ्जन नेपालीका नामले साहित्य क्षेत्रमा परिचित छन् । सम्मेलनमा मेरो बोल्ने पालो आयो । मैले बोल्ने क्रममा मुलुकको हित चिताएर यस्तो परम्परा रहेछ त्यो तोड्ने काम गरेँ । कपिलवस्तुमा भएको स्थायी शिक्षकको परीक्षामा यस्तो ढङ्गले रिजल्ट निकालेँ । मलाई यस्तो दबाब आयो । अहिले मलाई सुरक्षा जोखिम छ । अहिले पास भएका शिक्षकहरुलाई पोष्टिङ हुन नदिन हाजिर हुन नदिने लगायतका हरेक तिगडम गरिरहेका छन् । मैले नाम नभनीकन कपिलवस्तुका राजनीतिक रुपले सम्भ्रान्त परिवारका मानिसले यसरी यसरी काम गर्न दिइरहेका छैनन् भनेर बोलेँ । मैले बेठिक गरेँ भने मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरुले बेठिक भयो भनेर भन्दिनुपर्‍यो होइन भने मैले कुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दिनुपर्यो । साथै मेरो शारीरिक सुरक्षाको समस्या पनि देखिएकाले आवश्यक व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्‍यो भनेँ । मन्त्री, सचिव सबैले ट्वाँ परेर सुने ।
मन्त्रीको बोल्ने पालो आयो । मन्त्रीले तपाइँले एकदम ठीक गर्नुभएको छ । तपाइँको सरुवा आदि इत्यादि केही हुँदैन । यही हिसाबले काम गर्नूस । केही परे मलाई खबर गर्नू, म सिडियोलाई भनिदिन्छु भन्दै आड भरोसा दिए । पञ्चायती राजनीतिमा पोख्त मानिस उनले राजनीतिक रुपमा सम्भ्रान्त परिवार भन्ने बित्तिकै सबै बुझिगए । उनले मेरो कामको समर्थन गरिदिए । म आनन्द मान्दै कार्यक्षेत्र फर्किएँ । हरेक दिन आजै सरुवा हुन्छ, भोलि नै सरुवा हुन्छ भन्या छ बडो दिक्क भइरहेका बेला यस्तो भएको थियो । अभिषेकप्रताप साह (?) हो जस्तो लाग्छ क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व थियो । सायद उनी कृषि राज्यमन्त्री थिए । तर क्याबिनेटमा उनको केही चल्दो रहेनछ । स्थायी शिक्षकहरुलाई पोष्टिङ गर्दै गएँ । मेरो हक्की स्वभाव भएकाले हाजिर गराउनूस् नभए तपाइँको स्कूललाई जाने अनुदान रोकिन्छ भनिदिएँ ।
त्यो बेलामा एउटा सुखद् अनुभूति पनि भएको छ । तिनै पढेलेखेका मानिसमध्ये केही मधेसी समुदायका मानिसहरु पास भएका थिए । एक जना बूढा मानिस लट्ठी टेक्दै आएर टेबुलको अगाडि पट्टिको भूइँमा बसे । मैले सोफामा बस्नुस् न भनेँ । उनले मानेनन् । ती बूढा मानिस त्यहाँ बसेर मलाई ट्वाल्ल परेर हेरेको हेर्यै गर्छन् ! होइन तपाइँको के काम थियो भन्नोस्नँ भन्यो– होइन मेरो केही काम छैन भन्छन् । केही कामले त होला नि यहाँ आउनुभएको भन्यो– मेरो छोरो तपाइँहरुले लिनुभएको परीक्षामा पास भयो । मेरो भनिदिने मानिस कोही पनि थिएन । कसैले हाम्रो कुरा सुन्दैनथ्यो । तपाइँका कारणले गर्दा कसरी भयो ? न त्यो कुनै राजनीतिक समूहमा नै पर्थ्यो भने । ती बूढा मानिस अलिक सुझबुझ भएकै रहेछन् जस्तो लाग्यो । तपाइँकै कारण मेरो छोरा पास भयो, पोष्टिङ पनि भयो– तपाइँलाई भगवान्ले कल्याण गरुन् भने । तपाइँको निधार पनि ठूलो रहेछ, भाग्यमानी हुनुहोस् भनेर आशीर्वाद दिन आएको भने । एक किसिमको पीडामा रहेका मानिसले यी सबै कुरा अगाडि आएर बोलिदिँदा मैले पनि पुरस्कार नै पाएको अनुभूति गरेँ ।
साह परिवारका मानिस रहेकै स्कूलमा ती बूढाका छोरालाई पोष्टिङ गर्नुपर्ने थियो । केही गर्दा पनि मानिरहेका थिएनन् । मेरो स्कूलमा काम गरिरहेको अस्थायी मानिसलाई हटाएर तपाईँले पठाउनुभएको स्थायी शिक्षकलाई कुनै पनि हालतमा हाजिर गराउँदिन भने । ती मानिस जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य पनि थिए । यो सबै राजनीतिक प्रतिनिधित्व थियो । उनले हिन्दीमा भने– अरे हम उस टिचरको किसि भी हालतमा स्कूलमे हाजिर नहीँ कराएंगे, नहीँ कराएंगे, नहीँ कराएंगे । मैले उनलाई भने– सुन्नुस्, म हिन्दीमा बोल्न जान्दिनँ । म नेपालीमा बोल्छु । तपाइँहरु राजनीतिक रुपले सबल हुनुहुन्छ, त्यसमा मेरो भनाइ केही छैन । तर एउटा कुरा के छ भने तपाइँले त्यो टिचरलाई कुनै पनि हालतमा हाजिर गराउनुपर्छ । त्यो टिचरलाई त्यस स्कूलमा हाजिर गराउन सकिनँ भने अरु २०० टिचरलाई पनि हाजिर गराउन सक्दिनँ । किनभने त्यहाँ पनि अस्थायी शिक्षक काम गरिरहेका छन् । तपाइँले कुनै पनि हालतमा हाजिर गराउनै पर्छ नभए त्यो टिचरले यो सोफामा बसेर तपाइँको स्कूललाई निकाशा हुने रकमबाट तलब खान्छ ।
ऊ मन्त्रीको मानिस भएकाले केही दम्भ हुने नै भयो । ‘हम दिखा देंगे’ या वा भन्दै के के भन्यो । उसले केही गर्दा पनि नमानेकाले मैले निकासा हुन दिइँन । रकम रोकियो । मैले शिक्षा कार्यालयबाटै ती शिक्षकलाई तलब खुवाइरहेको थिएँ । निकै ठूलो खैलाबैला हुन थाल्यो । उनीहरु आफैं अब मिल्नु पर्‍यो भन्न थाले । ती मानिस त्यो स्कूलको सञ्चालक समितिको पनि अध्यक्ष रहेछन् । बिस्तारै मिल्नुपर्‍यो भन्नेहरु धेरै भए । अब कसरी मिलाउने ? हामी दुवै समूहले एउटा सम्झौता गर्‍यौं । तपाइँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एक–दुई महिनाका लागि लखनऊतिर जानूहोस् । त्यो अवधिका लागि कोही एकजना निमित्त अध्यक्ष बन्नेछन् र स्थायी शिक्षकलाई त्यहाँका हेडमास्टरले हाजिर गराइदिनेछन् । तिनले एक महिनाजति त्यहाँ काम गरेपछि म सरुवा गरेर अन्त कतै लगिदिन्छु भन्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि तपाइँ आउनूहोला । ए म नभएका बेलामा यसो गरेछन् भन्नुहोला । यसो गर्दा तपाइँको पनि इज्जत रहने मेरो पनि प्रशासनिक उद्देश्य पूरा हुने । यसो गरेर हाजिर गराएरै छाडेँ ।
म त्यही हुँदा हुँदै शिक्षा मन्त्री नारायणदत्त जोशी विदेश जानुपर्ने भएछ । मन्त्रालयमा निमित्त भएर तिनै कृषि राज्यमन्त्री पुगे । उनी क्याबिनेटमा पुग्नासाथ ल त्यो जिशिअलाई सरुवा गर्नुपर्‍यो भन्दै फाइल ल्याउनुहोस् भनेछन् । त्यसपछि मलाई लमजुङ सरुवा गर्दिहाले ।
प्रस्तुतिः ठमनाथ घिमिरे
एनजीओको खेलौना बन्दै नेपालको ओली सरकार	२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०१:३४
मुख्यमन्त्रीज्युहरुको प्राथमिकता प्रहरी सरुवा कि प्रदेशको विकास ?	८ मंसिर २०७५, शनिबार ०१:२७
नेपाली ह्यारी भण्डारीबाट पाठ कहिले सिक्ने ?	३ मंसिर २०७५, सोमबार १२:०४
बाल गुरुजी र अध्यात्मको यात्रा	१ मंसिर २०७५, शनिबार ०२:३६
कम्युनिस्ट सरकारले केही गरेन, राष्ट्रवादी शक्तिको खाँचो	१२ कार्तिक २०७५, सोमबार ११:५५
अमेरिकामा आफ्नै कारणले बदनाम हुँदै नेपाली	१५ आश्विन २०७५, सोमबार १२:४९
१ पुष २०७५, आईतवार ०१:२६
२९ मंसिर २०७५, शनिबार ००:३०
२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार १९:००
टिपिकल नेवारी खाना अब काठमाडौँ फ्युजन किचनमा २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:४७
नेपालय पाटनमा होस या भक्तपुरमा पाइने टिपिकल..
दुई केन्द्रीय सदस्यको वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस बैठकमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्टको प्रस्ताव २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:४७
जापानमा अमेरिकी सेनाको दुईवटा लडाकु विमान ठोक्किए, ६ जना बेपत्ता २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १४:४७
This function has been disabled for NepalayaNews.com.